Ukuphupha ngemacaroni Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-noodle ezingenanto ezi-tubular kunye nezigobileyo zibizwa ngokuba yi-macaroni. Ubude bayo bunokwahluka. Kwindlela yayo efinyeziweyo, imacaroni ikwabizwa ngokuba yi "Hörnli".
Isitya esaziwayo esisebenzisa i-macaroni sisitya se-macaroni kunye netshizi. Esi sidlo se-pasta sithandwa kakhulu kwi-Great Britain nase North America. Kulesi sidlo, ipasta ixutywe nesosi yesonka samasi emva koko ibhaka nesonka samasi. Kodwa oku kutya kuthandwa kakhulu eJamani kuba kuyakhawuleza kwaye kulula ukukulungisa kwaye kumnandi kakhulu.
1 Uphawu lwephupha «imacaroni» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iMacaroni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iMacaroni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imacaroni» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, iphupha malunga nemacaroni ekuqaleni linokuba nesizathu somzimba. Oku kuthetha ukuba umphuphi unokuziva elambile kwaye ke amaphupha ezi noodles.
Nangona kunjalo, ukuba oku akunjalo, uphawu lwephupha "macaroni" ihlala iqulethe ukululeka kumntu ophuphayo. Kuya kufuneka ukhawuleze kwimiba ethile ebomini bokuvuka kwaye ungaphazanyiswa.
Ukuba ubona uninzi lweeodle ezingenanto kwiphupha lakho, kungcono ugcine imali yakho kunye. Kuba amaxesha okusilela anokufika. Ukutya imacaroni ngelixa uleleyo kunokubonisa ukuba into ethile izakuthatha ixesha elide kunokuba ubufuna ukuvusa ubomi. Ke ngoko, kufuneka ngomonde hlala.
Ukuba umphuphi ufumanisa incasa yesitya semacaroni emnandi kakhulu, mhlawumbi kungekudala ilahleko yemali ubunzima. Akunakulindeleka ukuba mkhulu, kodwa kuya kuhlala kubuhlungu kwabo bachaphazelekayo. Ukuba upheka imacaroni epanini ngokwakho ephupheni lakho, kuya kufuneka ukhathalele iimfuno zakho ngokunxulumene neqabane lakho.
Ngokwesiqhelo ukukhonza imacaroni ngesisefo kunokubonwa njengephupha ukubonisa ukuba umntu kufuneka akhathalele ngakumbi ngezinto ezintle ebomini.
Uphawu lwephupha «iMacaroni» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni ubona kumfanekiso wephupha "macaroni" kwelinye icala. isilumkiso kumntu ophuphayo. Akufanele wenze ngokungxama kwaye ungxamele umbandela ongakuvumeliyo. Kuya kufuneka uyazi ukuba yonke into ebomini ithatha ixesha.
Kwelinye icala, iphupha elinjalo linokuba ngu isicelo iqulethe ekugqibeleni ukufumana isiphelo kwinto ethile. Oku malunga noku kunokuhlala kufundwa kwiimeko zokuhlala eziphathekayo.
Ukuba upheka isidlo semacaroni ephupheni, oku kunokuhlala kukhokelela kumnqweno wemeko yokuvumelana ngokunxulumene neyakho. ubuntu ukuzekelisa. Nangona kunjalo, awufanelanga ungxamile apha, kodwa yiya kulo mbandela ngononophelo. Ukuba umphuphi ubeka imacaroni kunye netshizi casserole ephupheni lakhe eontini, ulungele utshintsho kuyo el mundo ukuvuka, okuya kuba kuhle kuye.
Isitya esigcwele imacaroni sinokuba ngumfanekiso ophuphayo unxibelelwano nabanye bhekisa. Oku kufuneka kuqhubeke nokubamba. Ukuba utya imacaroni ngecephe ephupheni lakho, unokujonga kwikamva ngendlela elungileyo. Kuba iyakushiya ngasemva kwexesha lokukhathazeka kunye nentlungu.
Uphawu lwephupha «iMacaroni» - ukutolika kokomoya
Kubonwa ngokwembono egqithileyo, uphawu lwephupha "macaroni" lunokubonisa umnqweno wamaphupha ukwanelisa iimfuno zakhe kwindawo yokomoya. yanelisa.